Qaybdiid iyo Moorgan; qodob ama maan mid ku qiimee! – Bashiir M. Xersi
Qaybdiid iyo Moorgan; qodob ama maan mid ku qiimee!
Date: 24 Oct 2016Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Had walba, marka sunta suuxsimaadku ka baxdo ama indha sarcaadku ka guuro ayey bulshadeydu soo hambaabirtaa, ammin xeero iyo fandhaal ka la dhaceen, waaba tan ugu darane, ay GUNNIMADU ku dheeraatay! Ma hubsato, u ma fiirsato, is ma weydiiso, shalay maanta ku ma xirto, maantana berri ku ma saadaaliso. Hawtalhamagnimo!
Ma jeclayn doorashadan 2016 in aan ka wax ka qoro QABQABLE iyo DAGAAL OOGE, haddana, waanigaa ka fursan waayey, mar haddii mid uu ku soo baxay xubinnada AQALKA SARE, GALMUDUG u metalaysa, waa QEYBDIIDE, kan kalana uu ku sigtay, in uu ka mid noqdo xubnaha AQALKA SARE PUNTLAND u metelaya, waana MOORGAN!
Ma ahayn wax aan la filayn in ay dhacaan, balse, waxaa yaqyaqsi iyo yaxyax lahaa sida loo la falgalay, oo midna SHAYDAAN looga dhigay, kan kalana looga wada gaabsaday, ka dib markii uu soo bixi waayana ku mutaystay hambalyo iyo bogaadin, sidoo kalana maamulkii uu sharraxnaa dusha looga la dhacay AMMAAN!
Qaybdiid iyo Moorgan; labo QABQABLE. Labo DAGAAL OOGE. Labo gacan ku dhiigle. Labo macangag. Labo dilaa. Labo hoggaamiye kooxeed. Labo isu daran, dadkooda iyo dalkoodana u daran, haddana, haldoorro iyo halyeeyo aan u naqaan, waliba la ka la xigsado.
Sidaa oo ay tilmaamo xun, tusmooyin liita iyo tijaabooyin qarracan leh u sameeyeen, summadna ay u tahay, haddana, aniga Bashiir ahaan, qalad u ma arag isi sharrixidda labadooda, yaabna haba sheegin, ee waxaa iga la sii xun bulshada wali u oggol, in ay dhexjoogaan ka sokow, haddana, ay maamuus, magac iyo muunaad ka rabaan, mushaarna u dheer yahay, si ay masiirkooda u maamulaan, ka dib markii ay maalmahoodii mugdi iyo madaw galiyeen!
Marka laga soo tago kaalinta faldambiyeed ee ay lahaayeen, haddana, inta garsoor xukun ku ridayo waxay ahaanayaan DAMBILAAWAYAAL. Eedda bulsho iyo utunta umadeed waa meesheeda. Taas waa midda aan u lahaa, in ay is sharraxaan waa gartood, maxaa yeelay, wax u diiday ama ka hor istaagay ma jirin, mana la jideyn.
Mar haddii dawladdii dhexe ka gaabisay, in ay jideyso xeer dhigaya, in qabqablayaashii dagaalka aysan xil dawladeed oo ugu yaraan sare qaban karin, mar haddii guddigii doorashada uusan dhigin qodob qeexaya, in dagaal ooge uusan isi sharrixi karin, wax aan u eedo Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE ma jiraan, aan ka ahayn sooyaalkooda silcin.
Mar haddii maamul beeleedyadii ay ku abtirsanayeen ka gaabsheen in ay jideyaan xeer dhigaya, in qabqablayaashii dagaalka aysan xil maamuleed oo ugu yaraan sare qaban karin, mar haddii guddigii doorashada iyo kii maamul goboleedyadu aysan dhigin qodob qeexaya, in dagaal ooge uusan isi sharrixi karin, wax aan ku eedo Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE ma jiraan, aan ka ahayn sooyaalkooda silcin.
Ka sokow, Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE, labada maamul dhismahoodii hore iyo dhidiba u taaggiiba kaalin wayn ayey ka ahaayeen, marka sidee labada beel uga kaaftoomi karaan, uguna dhihi karaan; maanta maalinteenni ma ahane, saddax tillaabo dib u dega? Dabcan, waxay ahaan leheed go’aan geesinnimo, ee beesha ku dhiirran karta, waa tee?.
Intaa ka dib, sooyaalka doorasho iyo guddi hagiddeeda hal aan tusaale ugu soo qaato. Doorashadii 2012, guddiga doorashadu waxay meelmariyeen, in qabqablayaashii dagaalku aysan is ku sharrixi karin xubin baarlamaan. Ogow, xukuumaddu hore u ma dejin xeerkaase, ee kaliya waxaa qortay hab maamuus ahaan guddigii doorashada, oo run ahaan in ka badan boqolkiiba siddeetan hirgashay marka laga reebo inyar oo Sheekh Shariif ku soo daray.
Hadda waxaa la dhihi karaa, in xukuumadda iyo guddigaba ay uga gaabsadeen xeerarka caynkaa ah, in tirida qabqale ee la filan karo in ay tartamaan amaba labada aqal midkoosa soo galaan in ay aad u yaryihiin marka la barbardhigo tiradii caadka iyo cammaaradda ahayd ee 2012, oo keentay, in xeerkaa la qodbo lana qeexo.
Si walba oo qodobkan sidaa loogu qiilin karo, haddana, bulsho intaa oo baas ah ka soo martay qabqablayaal, marna ka qaadi mayso in ay yaryihiin masuuliyadda akhlaaq ee dulsaaran, haddii aysan marag ku sii furayn ah, in aysan lahayn dareen, dux iyo damqasho, ay nafteeda, ubadkeeda, ayaahameeda iyo aayaheeda u hayso.
Taa ka sokow, waxaa la yaab leh, in dad badan maamulka Galmudug ku dhaleeceeyeen, in ay doorteen Qeybdiid, halka ay maamulka Puntland ugu hambalyeeyeen iyaga oo ku bogaadiyey, in aysan dooran Moorgan!
Horta mid noo ka la saara; labada maamul in ay u oggolaadaan labadaa qabqable in ay is sharxaan iyo in midkood uusan tartan cod iyo doorasho uusan ku soo bixin! Ma ku jiraa labada maamul, hal masuul oo yiri; ninkaa qabqalaha ah na ma meteli karo, ee liiska murashaxiita ha laga saaro? Marka haddii uusan ku soo bixin cod ewelba “LACAG” lagu ka la baxayey, ma waxaad u taqaanniin ammaan? Alla maxaa dhib idin haysta!
Nin tartamay, oo cod looga taagroonaday, ma garan karo, waxa maamulkii cod bixinta iyo tartanka furay looga hambalyeeyo, maxaa yeelay, haddii ay ammaanteyda iyo midda inta maanka fayoow rabaan, waxay eheed, inaanba loo oggolaan, in ay tartamaan, ee nin ku soo bixi waayey tirsi cod iyo lacag, lagana yaabo, in ay wehliso wax kale, maxaad ka ammaantaan, walibana horey idiin dilay?.
Si kale, anoo raba, in aan ku dilo, ayaa waxaa la yiri, cod ha loo qaado, markaas ayaan codkii ku waayey siyaabo kale, ee aan ahayn, in laga baqayo in aan ku dilo, marka codeyntaas aanan helin haddaad igu ammaanto, saw maangaabnimo kuu ma ahan, aniguse ma mudnahay ammaantaas? Dabcan haa inta aad maabgaabimada wax ku miisaamee.
Ka sokow, Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE hadday ku la tahay, dad aan mudnayn in xil loo dhiibo, ma ogtahay, in haddadan “2016?”, aad sadarradan aqrinayso, in qabqable Moorgan yahay LA TALIYAYAH ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid? Marka maxay isugu kaa dhaamaan, in qabqable Moorgan noqdo LA TALIYE ra’iisul wasaare iyo xildhibaan aqalka sare ku jira? Ku fiiri tusaalaha sare, waa adoo i tiraa, waxaa ii roon, in aad iga disho gacmaha, halka aad iga dili leheed lugaha, oo ka dhigan, mar walba, in aad oggoshay, in aan ku dilo!
Sidoo kale, Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE haddii ay ku la tahay, dad aan mudnayn in xil loo dhiibo, ma ogtahay, in haddadan “2016?”, aad sadarradan aqrinayso, in qabqable Maxamad Cabdi Yuusuf, oo is la qabqale Moorgan u qaabilsanaa lacag aruurinta iyo dhaqaale raadinta, uu baarlamaanka ku jiro, haddana, uu meelaha ku la calaacalayo, in aan xilka sii sayo waxaa ii diiday Gebre, oo uu shalay markii uu dadka Muqdisho iyo Koofurta xasuuqayey u riyaaqsanaa?
Sidoo kale, Qeybdiid iyo Moorgan, labadaa DAGAAL OOGE, hadday ku la tahay, dad aan mudnayn, in xil loo dhiibo, ma ogtahay, in haddadan “2016?”, aad sadarradan aqrinayso, in qabqable Axmad Madoobe uu yahay madaxweynaha maamulka Jubbalad, oo uu isagu gacantiisa ku saxiixi doono aqoonyahanno, waxgarad iyo masuuliyiin aqalka sare u meteli doona maamulkaas? Ku fiiri tusaalaha sare, waa adoo i tiraa, waxaa ii roon, in uu i dilo hebel, halka uu iga dili lahaa hebel kale, oo ka dhigan, mar walba, in aad oggoshay, in lagu dilo, waliba dad gaar ah ku dilaan!
Haddaan kuu ballaariyo haddaad xanaaqaysaan. MOORGAN IYO QAYBDIID, mid weliba wuxuu ku eedaysan yahay dagaal oognimo, hadda i la eeg, Soomaliland waxaa u sharaxan Muuse Biixi magaca aad u bixinayso iyo sooyaalkiisa adigaa yaqaan aqriste. Waxaa aqalka sare galay oo ku biirey Faroole. Ogoow Faroole wuxuu dagaal la galay dadka deegaanka Puntland, Somaliland iyo Galmudug, waxaana lagu tiriyaa inuu intuu talada hayey sabab u ahaa dagaallo badan, haddaba, isagu miyaanu ahayn dagaal ooge? Adigaa yaqaan waxaad u bixinayso aqriste.
Soomaalida haddii maanta Cali Xuseen Raage (Cali Dheere) loo keeno, marka hore waa qaylinayaan, laba bilood ka dibna waxaad arkeysaa koox difaacaysa. haddi ogoow wuxuu faldambiyeedkiisu ku ekaanayaa laba billood iyo ka yar. Ogoow in hoggaamiye kooxeed iyo diimeed badan weli ku milan yihiin maamul walba.
Midda iigu sii yaabka badnayn waxay tahay, markaan arkay kuwo “PETITION” ka sameeyey Qeybdiid, halka afartii gu’ ee tagtay, ay ka indha saabnaayeen Maxamad Cabdi Yuusuf, Qanyare, in kasta oo uu wiilkiisa ku wareejiyey iyo Axmad Madoobe, anoon ka tagayn Moorgan oo la taliye RW noqday walina ah!
Bal qofka caynkaa ah, damiirka iyo dadnimada uu Qeybdiid kaliya ku beegsaday, ee uusan inta kale ku arag yaa ii sheegi kara? Haa haddaan gartay, waxaa la yiraa; QABYAALAD iyo hal QABIIL abbaar, kuwo kalana ka qallee! Waxaad ogaataa, inta garaadkaagu sidan wax u tebinayo, in ma gudbe iyo aad ahaan doonto guulwade lagu dangaaro! Hal talo iga hoo; wax aadan miisaami karin, muggeedana wada gudbin karin ha dhex muquuran, ee meelahaaga is ka lafayso, adoon is maqiiqin!
Previous Previous post: MAALMAHAYGII MUQDISHO; ammaanka Q3AAD
Next Next post: MAALMAHAYGII MUQDISHO; barashada iyo caafimadka Q4AAD